Xulka cayaaraha | Radio Himilo | Page 30
Home / Xulka cayaaraha (page 30)
Alvaro Morata kasoo muuqanaya kulanka Chelsea ay wajahayso Bayern Munich.
radio himilo July 24, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 80 Views
Muqdisho – Tababaraha Chelsea, Antonio Conte ayaa shaaca ka qaaday in uu doonayo Alvaro Morata kulanka saaxiibtinimo oo habeennimada Talaadada ah ay la balansan yihiin kooxda Bayern Munich. 24 jirkan ayaa dhamaystiray heshiis Rikoor ah oo uu kaga yimid kooxda ...
Manchester City oo xaqiijisay saxiixa difaaca Monaco ee Benjamin Mendy.
radio himilo July 24, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 35 Views
Muqdisho – Manchester City ayaa ku dhawaaqday inay dhamaystirtay saxixiixa ciyaaryahankii AS Monaco ee Benjamin Mendy kaas oo difaaca bidix kaga ciyaarayay kooxda reer France. 23-jirkan ayaa xiran doona lambarka 22 ee funaanadda City, wuxuuna saxiixay heshiis shan sano ah ...
Ronald Koeman oo doonaya laba ciyaaryahan oo tayo leh
radio himilo July 23, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 49 Views
Muqdisho – Macalinka kooxda Everton, Ronald Koeman ayaa doonaya inuu soo xera galiyo labo ciyaaryahan oo kale kuwaas oo leh tayo wanaagsan, sida uu yiri. Ronald Koeman ayaa caddeeyay inuu ku faraxsanyahay qaabka ay kooxdiisu ula macaamishay suuqa kala iibsiga ...
Emre Can oo heshiis lagaaraya kooxda Juventus
Muqdisho – Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Liverpool, Emre Can ayaa heshiis afka ah lagaaray Marwada Duqda ee Juventus. Xiddigan qadka dhexe ayaa lasoo werinayaa in uu ku dhow yahay ku biirista kooxda Juventus kadib markii uu heshiis la meel-dhigay ...
Mourinho oo xaqiijinaya in de Gea uu sii joogayo Man U sanadka xiga.
radio himilo July 23, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 46 Views
Muqdisho – Tababaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay in goolhayaha kooxda uusan sandkan ka tagi doonin naadiga – isla markaana uusan ku biiri doonin Real Madrid. 26 jirkan ayaa waqti dheer lala xariirinayay Los Blancos; markii ugu dhaweyd ...
radio himilo July 22, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 35 Views
Muqdisho – Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa in ay kooxaha Arsenal iyo Paris Saint-Germain ku garaacday saxiixa tartanka loogu jiray weeraryahanka AS Monaco Kylian Mbappe. Kadib markii hana-qaadkan uu dhaliyay 26 gool 44 soo muuqasho oo uu sameeyay dhamaan ...
radio himilo July 22, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 48 Views
Muqdisho – Tan iyo markii uu idlaaday xagaagii hore, Giroud waxaa lala xariirinayay in uu ka bixi doono Emirates Stadium kadib markii uu sameeyay kaliya 11 soo bilaabasho horyaalkii dhamaaday ee Premier League. Kooxo ay kamid yihiin Marseille, Everton iyo ...
Manchester City oo Monaco kala heshiinaysa saxiixa Benjamin Mendy.
radio himilo July 22, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 60 Views
Muqdisho – Kadib markii City oggolaatay in ay Roma ka iibiso Aleksandar Kolarov, Pep Guardiola ayaa u dhaqaaqay in uu raadiyo ciyaar yahan ka ciyaara booska midig ee difaaca si uu ugu xoojiyo kooxdiisa koobaad. Tabaraha City ayaa lagu soo ...
Kadib qiimaha Morata, maxaa iska badalay liiska laacibiinta ugu qaalisan dunida?
radio himilo July 20, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 96 Views
Muqdisho – Laacibkan heerka caalami ayaa ka dhaqaaqay Spain isga oo u jiheystay Engilsh-ka iyo kooxda ka dhisan caasimadda UK ee Chelsea. Morata 80 Million oo lacagta Yurub ayuu ugu wareegay kooxda difaacanaysa horyaalka EPL-ka ee Blues-ka – isaga oo ...
radio himilo July 20, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 104 Views
Chelsea ayaa 80 Million oo lacagta Yurub ah kula wareegtay ciyaaryahanka Spain u dhashay ee Alvaro Morata kaas oo ka yimid Real Madrid, wuxuuna laacibkan sidaas ku noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan ciyaartoyda Spain Taariikhda. Fernando Torres ayaa sanadkii 2011-kii ...